Semalt: Ahoana no Mamorona Plugin Functional Wordpress
Maro ny tranga raha mila mamorona plugin ny fonctionn'ny olona ny olona. Na izany aza, lahatsoratra vitsivitsy monja ao SEO no manazava ny fomba hamoronana plugin plugin Wordpress.
Ao amin'ity torolalana SEO nataon'i Andrew Dyhan, manam-pahaizana manokana avy amin'ny Semalt , ianao dia hianatra hoe inona ny WordPress plugin, nahoana ianao no mety hamorona iray, rehefa mamorona plugin fonctionnale sy ny fomba Ataovy izany. Voalohany indrindra, ilaina ny manomboka amin'ny fahalalana bebe kokoa momba ny plugin fonctionnaire.
Plugins dia sifotra code code an'ny PHP, izay matetika ampiasaina ny tranonkala sy ny asany amin'ny tranokalanao. Manampy ireo tompona tranonkala maro izy ireo hanatsara kokoa ny tranonkalan'ny WordPress amin'ny alàlan'ny fananganana plugin-fonctionna ho an'ny tetikasa. Azonao atao, ohatra, ny mamorona plugin iray ahafahana mamadika indray amin'ny pejy manokana isaky ny misy asa manokana. Ny plugin dia tahiry PHP, izay miasa toy ny rakitra ofisialy na endrika hafa.
Ny plugin fonctionnaire dia mety hampitombo ny lafiny amin'ny WordPress theme. Izany dia ahafahanao manova ny lafiny samihafa amin'io lohahevitra io nefa tsy mila manova ny ampahany amin'ny fehezanteny manan-danja kokoa. Ny tsy fahampian'ny WordPress amin'io fomba io dia ny fahafantaranao ny fanovana rehefa manavao, manova na manova ny loha-hevitrao. Ity teknika ity dia mety ho vahaolana amin'ny fotoana lava amin'ny vokatra tadiavinao. Ankoatra izany, azonao atao ihany koa ny mitazona ny script amin'ny fampiasana azy ao amin'ny plugin vaovao anao.
Ahoana no hamoronana plugin plugin
Ny famoronana plugin fonctionna dia iray amin'ireo asa tena tsara indrindra. Voalohany indrindra, tokony hitandrina ianao amin'ny famoronana sy fanitsiana ireo PHP rakitra. Avy eo, mila mamorona plugin ianao. Afaka mamorona tahiry ianao ary mametraka ny rakitra PHP ao aminy. Ny fampiasana anarana mitovy ho an'ny rakitra sy ny folder dia tena ilaina. Avy eo, ilainao ny mpaka sary IDE tianao mba hamitana ny majik.
Plugin WordPress iray mila lohateny. Ny lohateny dia ny ampahany voalohany amin'ny plugin. Izy io dia ahitana ny fampahalalana fototra rehetra momba ny plugin. Ny fampahalalana fanalahidy amin'ny plugin anao dia mety ahitana ny anaran'ny plugin, version ny plugin sy ny famaritana. Ohatra iray amin'ny lohan-doko anankiray no ho toa, 8)
Ilaina ny mampiditra ny rakitra readme amin'ny plugin anao. Ity dia antsoina hoe file readme.txt. Avy eto, afaka mampakatra sy manantona ny plugin ianao Source .